CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း - Page4- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပြန်စာ - CPE ဖြင့် Wireless လွင့်နည်း , ဖမ်းနည်း
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော် wifi လွင့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်း ဒါပေမဲ့ လုံခြုံမှုအပိုင်းမှာ စိတ်မသက်သာဘူးဗျာ
ကူညီကြပါအုံး လုံခြုံမှုအတွက် hotspot software သုံးရင် အဆင်ပြေမလား<<<အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်
hotspot software နဲ့ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းလေးကို ပုံနဲ့တကွ ရှင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်း<>>>>
ပြီးတော့ ssid name ကိုဘယ်လိုဖျောက်ထားရမလဲဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ် နောက်ပြီးတခါထဲ
mac address ထိန်းချုပ်မှုကိုလဲဖြေကြားပေးကြပါအုံး အားကိုးပါတယ် အကိုတို့ရေ..................
Find More Posts by kokyisoe
Originally Posted by kokyisoe
ဆော့ဖ်ထ်ဝဲတော့ မသုံးဖူးဘူး။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် ပြောပြပေးပါမယ်။ Router ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ CPE ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Setting တွေပြုပြင်ချင်လို့ဝင်ပြီဆိုရင် Setting တစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့ Function တွေကို အသေးစိတ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတာရယ်၊ ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာတွေကို ညာဘက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
၁။ SSID Name မပေါ်အောင်ပြုလုပ်နည်း။
router မှာဆိုရင်တော့ Wireless > Wireless Settings ထိသွားပါ။ အဲဒီနေရာရဲ့အောက်ဆုံးမှာ Enable SSID Broadcast ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါရဲ့ဘေးက အကွက်မှာရှိတဲ့ အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
CPE မှာဆိုရင်တော့ Wireless > Wireless Mode Settings ထိသွားပါ။ Access Point ရဲ့အောက်မှာ Enable SSID Broadcast ဆိုတာရှိတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုပဲ အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ WiFi ဖမ်းချင်ရင်တောင်မှ SSID name ကိုသိမှရပါမယ်။
၂။ Security ပြုလုပ်နည်း။
router မှာဆိုရင် Wireless > Wireless Security ထိသွားပါ။ CPE မှာဆိုရင် Wireless > Security Settings ထိသွားပါ။ သုံးမျိုးထဲကမှ ကြိုက်တာတစ်ခုရွေးပေးပါ။ ညာဘက်မှာလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ Security ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ SSID name သိပြီဆိုရင်တောင်မှ password မသိရင်အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
၃။ MAC Filtering ပြုလုပ်နည်း။
router မှာဆိုရင် Wireless > Wireless MAC Filtering ထိသွားပါ။ CPE မှာဆိုရင်တော့ Wireless > MAC Filtering ထိသွားပါ။ Wireless MAC Address Filtering: ကို Enable ပေးပါ။ ပြီးရင်အောက်က Deny the stations not specified by any enabled entries in the list to access ကိုရွေးပေးပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ router/CPE မှာ MAC Address ကိုထည့်ပေးထားတဲ့လူကလွဲလို့ တစ်ခြားလူများ အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီသုံးခုကိုမှ ကျော်လွှားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်လဲ အဲဒီလူရဲ့ ပညာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ပေးသုံးသင့်ပါတယ် ။ ၀င်ပြီးတော့ ပေါက်ကရတွေ လုပ်သွားရင်တော့ မသိဘူးလေ။ Wireless > Wireless Statistics ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်ရဲ့ WiFi ကိုဘယ်သူတွေ အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
ဇာနည်စိုး, မေဦးမွန်, azp09, mmkyioo, phoelapyaee, tu tu
အကို pyait sone ရေကူညီပါအုံး အကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်တယ် cpe ကိုမလုပ်သေးဘူး tp-link router
မှာ wireless mac filtering:enable ပေးပြီး deny the stations specified by any enable entires list to accessကိုလည်းရွေးထားတယ် new address မှာ ထဲ့တယ် android ရဲ့mac address ရယ် computer ရဲ့ mac addressရယ်ထဲ့လိုက်ပေမယ့် နောက်ထက် android တလုံးထပ်ချိပ်လိုက်တယ် ။ သုံးလို့ရနေတယ် တခါတလေ ပထမ၂လုံးတောင်မှ limit ပြပြီး သုံလို့မရပြန်ဘူး DHCP ကို enable ရော disable ရော ပေးပြီးစမ်းတာ အဆင်မပြေဘူးအကိုရေ တခြား setting ချတဲ့နေရာတွေမှာလွဲနေတာလားမပြောတက်ဘူးဗျာ။ အကိုတို့ကူညီကြပါအုံး ကျွန်တော်က ပထမလွှင့်ပေးထားတာက router ssid name ပေးပြီး security ခံပြီး CPE မှာလဲ ssid name ရယ် security
ထားပြီးသုံးပါတယ် ကျန်တာတွေတော့နားမလည်လို့ ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျ ။ ကျွန်တော့် wifi လုံချုံမှုအတွက်
ဘယ်လို့လုပ်ရမလဲကူညီပါအုံး .......နောင်တော်များဒို့ ....
ကျွန်တော်က TP_LINK 941 router ခံထားပြီး CPE 5210 နဲ့ လွှင်ချင်တာဗျ ..ဖမ်းတဲ့ဘက်ကတော့ computerပါမယ် android ပါမယ် ပြီးတော့ CPE နဲ့လဲဖမ်းချင်တာ ..။ လွှင့်မယ့် ပုံစံကတော့ လားရာတဲ့တဲ့ ကို CPE 2ခုကျောပေးပြီးပေးမှာပါ ရွာတန်းအရှည်လိုက် ပေးချင်တာဗျ။ ၀ယ်ထားတာကတော့ router 1လုံး CPE 5လုံး ဗျ ။
CPE 2လုံးကတော့လွှင့်ချင်တာဗျဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ။အသေးစိတ်ကနေ ပုံနဲ့တကွရှင်းပြပေးကြပါ။
မေ့နေလို့ ကျွန်တော်ကip star နဲ့လွှင့်မှာပါ။ တောထဲမှာဆိုတော့ ဆရာခေါ်ရတာအဆင်မပြေလို့ ကူညီပေးကြပါ
kokyisoe ခင်ဗျာ ...
ကျွန်တော်လည်း ရုံးအလုပ်တွေများနေတာနဲ့ ဖိုရမ်သို့ သိပ်မရောက်ဖြစ်ပါဘူး ... အခု ၀င်ကြည့်တော့ ကိုကြည်စိုး မေးထားတာလေးတွေ့လို့ပါ။ CPE Security ပိုင်းကိုတော့ PyaitSone ရှင်းပြထားတာ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ Hotspot သုံးတာကို နည်းနည်း ၀င်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ (ကျွန်တော် သိသလောက်ပေါ့ )။ ကျွန်တော်လည်း SkyNet Connection ကိုသုံးနေပါတယ်။ Hotspot နဲ့ Wifi ပြန်ပေးထားပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆင်ပြေတယ်လို့ဘဲ ပြောရပါမယ်။ (တစ်ခါတစ်ခါ Hotspot က ကြောင်နေတတ်လို့ပါ။ ) အခုကျွန်တော့်မှာလည်း အလုပ်တွေရှုတ်နေလို့ ကိုကြည်စိုးပြောသလို ပုံလေးတွေနဲ့ မရှင်းပြနိုင်တာ ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စာအနေနဲ့ဘဲရေးပြီး သိသလောက်လေး ရှင်းပြပေးပါမယ်။
Hotspot Software ကိုတော့ ကိုညီနေမင်း တင်ပေးထားတာလေးရှိပါတယ်။ Version ကတော့ Antamedia Hotspot 1.4.6 ပါ။ ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ်။ ကိုကြည်စိုး ရှာကြည့်လို့ အခက်အခဲရှိရင် ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့မယ်။
ကွန်ပျူတာ တစ်စုံ ၊ Network Port (၂) ခု ရှိရပါမယ်။ ( သာမန်အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ On Board Network Port တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် Network Card တစ်ခုစိုက်လိုက်ရင် ရပါတယ်။)
အဲဒီကွန်ပျူတာကို Windows XP တင်ထားရပါမယ်။ ( Hotspot က Windows7နဲ့ သိပ်အဆင်မပြေ ပါဘူး။)
(၁) Router မှ နေ၍ ကွန်ပျူတာ၏ On Board Network Port သို ချိတ်ဆက်ပါ။
(၂) ကွန်ပျူတာ Network Card ၏ Network Port မှ CPE (AP) သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ( AP တစ်လုံးထက် ပိုပါက Switch တစ်ခုခံပြီး ချိတ်ဆက်ရပါမယ်။)
(၃) ကွန်ပျူတာ ကိုဖွင့်ပါ။
(၄) ကွန်ပျူတာ၏ On Board Network Port IP Address ကို Router ၏ IP Address နှင့် ကိုက်ညီအောင် ပေးပါ။ Internet Connection ရ/မရ စမ်းကြည့်ပါ။
(၅) ၎င်း Network Port ကို Share ပေးလိုက်ပါ။
(၆) ကွန်ပျူတာ Network Card ၏ Network Port IP Address ကို CPE (AP) နှင့် ကိုက်ညီသည့် IP Address ပေးလိုက်ပါ။
(၇) Hotspot Software ကို Install လုပ်ပါ။ (Restart ဖြစ်ပါမယ်။)
(၈) ကွန်ပျူတာ ပြန်တက်လာရင် Configuration လုပ်ဖို့ Setup သို့ဝင်ပါ။ Network Port နေရာမှာ Network Card ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Save လုပ်ပါ။
(၉) User Account တစ်ခုဖွင့်ပြီး CPE Connection ကနေ ၀င်ရောက်ကြည့်ပါ။
(ဒီ Post ကိုရေးနေစဉ်မှာ ကျွန်တော် Hotspot Computer နားမှာ မရှိတဲ့ အတွက် တစ်ချို့နေရာလေးတွေမှာ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ကြပါ။)
တကယ်တော့ Network Port နှစ်ခုအနက် တစ်ခုကို Internet Connection ရအောင်လုပ်ပြီး အဲဒီရလာတဲ့ Connection ကို Share ပေးသုံးတဲ့သဘောပါပဲ။ သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာ Hotspot ကိုခံထားတဲ့ သဘောပါ။
Hotspot မှာ User အရေအတွက် သတ်မှတ်တာတွေ၊ User Account ဖွင့်တာတွေ၊ တစ်ခြားထိမ်းချုပ်မှု အပိုင်းတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ နည်းနည်းဝင်ပြီး ကလိကြည့်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။
Hotspot တင်ပြီးရင် Key ဖြည်ပေးရပါမယ်။ (Hotspot ကို ပိတ်လိုက်ပြီး Key file ကို Run လိုက်ပါ။ Antamedia Hotspot ကိုရွေးပြီး ညာဘက်က ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Hotspot ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ Register ထဲဝင်ကြည့်ပါ။)
ကိုကြည်စိုး အခက်အခဲရှိရင်ပြောပါ။ ကျွန်တော်လည်း အချိန်ရရင် ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဇာနည်စိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မေဦးမွန်, azp09, PyaitSone, tu tu
ကျွန်တော်လဲ ၀င်မေးပါရစေဗျာ ကျွန်တော် TP-Link Model No. TL-WA5210G ၂လုံးကို network ချိတ်တာ ဘယ်လိုမှမရလို့ပါ ... လွှင့်တဲ့ဘက်မှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး ဖမ်းတဲ့ဘက်က ဖြစ်နေတာပါ
ဒီလိုပါ ကျွန်တော်က လွှင့်တဲ့ဘက်က ip ကို 192 မသုံးထားဘူး 203 သုံးထားတော့ ဖမ်းတဲ့ဘက်မှာလဲ 203 ကို သုံးပါတယ် အဲဒီအထိလဲ ဘာပြဿနာမှ မရှိသေးပါဘူး Operation Mode ရွေးတော့ AP Router ကို ရွေးတာနဲ့ CPE က Restart ကျပြီးရင် ပြန်ကိုဝင်လို့မရတော့ပါဘူး ဘယ်နှစ်ခါလုပ်လုပ် ဒီအတိုင်းပါပဲ
AP Client Router နဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ် ခက်တာက No Internet Access ပဲ ပြနေတယ်ဗျ ဘယ်လိုချိတ်ချိတ် network ကို မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပါဦး ip က 203 နဲ့သုံးချင်တာပါ ပြန်ဖမ်းမယ့်ဘက်က ပြဿနာဖြစ်နေလို့ပါဗျာ ..... နောက်ပြီးလွှင့်တဲ့ဘက်က ssid ကို ဖျောက်ထားရင် ပြန်ဖမ်းတဲ့ cpe က ဖမ်းနိုင် မဖမ်းနိုင်ကို သိချင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုမေးချင်တာက ကျွန်တော့်မှာ CPE က wifi ကို Router က ပြန်ဖမ်းလို့ရလားဗျ
ဖြစ်တာက ဒီလိုပါ ကျွန်တော်က TP-Link CPE နဲ့ wifi လွှတ်ထားပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဖုန်း(iPhone4) နဲ့ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ချိတ်မရပါဘူး CPE က iPhone 3G အထိပဲ ရတယ်လို့ပြောပါတယ် iPhone4 ကိ support မလုပ်ဘူးလို့ သိရပါတယ် အဲဒါ CPE က wifi ကို iPhone4 နဲ့ ပြန်သုံးချင်ရင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲခင်ဗျာ
အဲဒီ TP-Link CPE က လွှတ်ထားတဲ့ wifi ကို Zyxel Router က ပြန်ဖမ်းလို့ရမလားဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ TP-Link CPE က ထွက်တဲ့ လိုင်းကို iPhone4 က ပြန်သုံးလို့မရပါဘူး Zyxel Router က ထွက်တဲ့လိုင်းကျတော့ iPhone4 နဲ့ သုံးလို့အဆင်ပြေနေလို့ပါ
ဖိုရမ်ထဲက ပညာရှင်ကြီးများကို အကူအညီတောင်းပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်မှာ CPE ၂လုံးနဲ့ တိုင်ပါတ်ပြီး အိပ်ရေးပျက်နေလို့ပါ ............
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ချစ်လား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အကိုတို့ရေနော်လဲသိသလောက်ပြောပါရစေဗျာ..Hotspot Software လောက်မခက်ခဲ့ပါဘူးသုံးရတာလဲလွယ်သူပါတယ် PC ကနေ Wifi ဖြန်လွှတ်လို့ရပါတယ်ဖိုင်ဆိုက်လဲသိပ်မကြီးပါဘူးအင်စတော့လဲလုပ်စရာမလိုပါဘူး Portable လေပါလိုချင်းရင်တော့အောက်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..အစင်ပြေကျပါစေ..အမှာပါရင်လဲခွင်လွှက်ပါဗျာ..
ပထမဆုံး apz09 ကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နယ်ဖက်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှာ CPE ဗူးနဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်နိုင်ဖို့အကူအညီပေးရပါတယ်။
ဒီဖက်မှာ သိပ်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်နဲ့ အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကို တင်ပြပါမယ်။ တတ်ကျွမ်းနားလည်ကြတဲ့ အစ်ကိုတို့ကအကြံလေးပေး ကြပါအုံးနော။ အခုကျွန်တော်လွှင့်ပေးရတာက စကိုင်းနက် (1Mbs) ကိုပါ။
ကျွန်တော်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ပုံစံကတော့ Skynet - Router - CPE ဒါကလွှင့်တဲ့ဖက်ကပါ။ AP Mode နဲ့လွှင့်ပါတယ်။
ဖမ်းတဲ့တိုင် ခြောက်တိုင်ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို AP Mode ထားပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချင်တာက ဖမ်းတဲ့ တိုင်တစ်ခုစီမှာ Desktop တစ်လုံးအပြင် ဖုန်းဆယ်လုံးလောက်ကိုပေးသုံးချင်ပါတယ်။ (အခုလောလောဆယ်တော့ Promotion ကာလအဖြစ် အားလုံးကိုတစ်လအလကားပေးသုံးထားပါတယ်)
အဲဒီကာလပြီးသွားရင် ဖမ်းတဲ့တိုင်တစ်တိုင်စီမှာ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့ ဖုန်းဆယ်လုံးကိုသာပေးထားပါမယ်။ ဖမ်းတဲ့တိုင်ခြောက်တိုင်ဆိုတော့ ဖုန်းခြောက်ဆယ်နဲ့ ကွန်ပြူတာခြောက်လုံးပေါ့။
ကျွန်တော်က တိုင်နံပါတ်တစ်မှာပေးသုံးထားတဲ့ဖုန်းဆယ်လုံးကို ကျန်ငါးတိုင်မှာသွားသုံးလို့မရအောင် Mac Address နဲ့ချုပ်ထားချင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဗျာ တိုင်ခြောက်တိုင်အတွက် Mac Address ခြောက်ဆယ်ရလာမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုလုပ်လို့ရရင် နံပါတ်တစ်တိုင်ကဖုန်းဆယ်လုံးဟာ ကျန်တဲ့တိုင်တွေကိုသွားသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ ကျန်တဲ့တိုင်တွေလည်းဒီလိုဘဲဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်နော။ (တိုင်အားလုံးရဲ့ Password ကတစ်ခုတည်းပါ။ အဲဒီလိုထားရတာကလည်း သူငယ်ချင်းကသိပ်မကျွမ်းကျင်လို့ပါ။) အဲဒီလိုလုပ်တာကိုလည်းအိမ်ကနေဘဲလုပ်ချင်တာပါ။ ဘာလို့အဲဒီလိုလုပ်ချင်ရသလဲဆိုရင် တစ်ချိုတိုင်တွေရဲ့ကွန်ပြူတာ မိန်းခလေးတွေသုံးတာမို့လို့ပါ။ ကိုယ့်နယ်မဟုတ်တော့ အမြဲတမ်းဝင်ထွက်နေလို့မကောင်းဘူးလေနော။ ဆိုလိုတာက တိုင်နံပါတ်တစ်က ဖုန်းတစ်လုံးပိုက်ဆံဆက်မသွင်းရင် သူ့ဖုန်းရဲ့ Mac Address ကိုအိမ်ကနေလှမ်းပြီးဖြုတ်ချ လိုက်မယ်ပေါ့။ အဲဒီတိုင်ခြောက်တိုင်လုံးကို အိမ်ကနေလှမ်းပြီးထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပါ့မလားဗျာနော။ ကဲ - အဖွဲ့ဝင်များဝိုင်းပြီးအုံးစားပေးကြပါနော်။ ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ရွာဖက်ကိုရောက်ရင် မြန်မာဘီယာကိုကြိုက်တဲ့အမြည်းနဲ့ ကြိုက်သလောက်သောက်။ မထနိုင်ရင်တောင်ကျွန်တော်တည်းတဲ့အိမ်ကို ကြိုက်တဲ့လူခေါ်ပြီးထမ်းပြန်မယ်။
Last edited by ဝေဟင်မေ; 13-10-2013 at 10:51 PM..
Find More Posts by ဝေဟင်မေ
အော် မြန်မာဖိုရမ်တွေလဲ ဇရပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီနော် ကျွန်တော်မေးထားတာကြာပြီ ၀င်ဖြေပေးမယ့်သူလဲ တစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး တကယ်ကိုသိချင်လို့မေးထားတာပါ ပညာရှင်ကြီးများ ကျော်များသွားတာလား ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာပဲ ကျူနေကြလားမသိပါဘူးဗျာ စောင့်လက်စနဲ့စောင့်ဦးပေါ့ဗျာ
ဒီ topicကို ဖတ်နေတာလဲ အခါခါပါပဲ
နာမလည်လို. ထက်ပီး မေးပါ၇စေ ဖို၇မ်က ညီကိုတွေ ဖြေပေးပါလား
ကျွှန်တော်ဆီမှာ ၇ှိတာက skynet လိုင်း တမိုင် ပတ်လယ် မှာ ၇ှိတဲ. ဖုန်း ၃၀လုံး android .ios computer ၄လုံး.
ကိုပြန် ပီး အင်တာနက် ၇ှယ်ပေးချင်တာပါ မတူညီတဲ.နေ၇ာတွေ မှာ၇ှိနေတဲ.ပါ.ဘာပစ္စည်း တွေ လိုအပ်ပါလဲ လမ်းညွန်ပေးစေချင်ပါတယ်
တမိုင်ပတ်လယ် မှာ ဖုန်းကို သွားတဲ.ဆီယူသွား၇င် လိုင်းေ၇ာမိနှိုင်ပါသလား
ဖုန်းတိုင်တွေ လို လေးမျက်နှာလောက် cpe ကိုလည်.ထား၇င် ဖမ်းတဲ.ဘက်က စက်သီးသန်.တပ်ဆင်ဖို.
လိုအပ်သေးလားသိချင်လို.ပါ. အဆင်ပြေမဲ.နည်းလမ်း၇ှိ၇င် ဘယ်လို network မျိုး လဲ လမ်းညွန်ပေးစေချင်ပါတယ်
skynet> computer >> ? ??? >>phones .share >>> computer share
Find More Posts by searchs
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Dec 2013
AP router နဲ့ လွှင့်ထားပြီးသားကို ဘာနဲ့ပြန်ဖမ်းရမလဲခင်ဗျာ။
Find More Posts by နဂါးကြီး
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2014
အကိုတို့ဆွေးနွေးထားကြတဲ့အတိုင်းဖတ်ကြည့်လို့ CPE နဲ့ လွှင့်တာနဲ့ Client အနေနဲ့ ဖမ်းတာကိုတော့ နားလည်ပြီ။ ခု ကျွန်တော့် ပြသနာက Access Point အနေနဲ့ လွှတ်ထားတဲ့ CPE ကို ကိုက်တစ်ရာအတွင်း ပြန်လွှင့်ပေးနိုင်မဲ့ CPE အနေနဲ့ ဖမ်းချင်တာ ဖမ်းလိုက်တိုင်း Client အနေနဲ့ ဖမ်းလို့ရပြီး ဘာဖြစ်လို့ Repeater တို့ Bridge (Point to Point) အနေနဲ့တို့ ပြန်လွှင့်လို့ မရတာလဲခင်ဗျာ။
Lovia Awng ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Lovia Awng